Malezia - Fampiasana tomban'ezaka tombam-bidy | Fiaretana haran-dranomasina
Malezia - Fampiasana tomban'ezaka
Nosy Tioman, Malezia
Nosy Tioman no nosy lehibe indrindra atsinanan'ny morontsiraka atsinanana amin'ny Peninsular Malaysia. Ity nosy ity dia toeram-ponenan'ny mponina mitombo eo amin'ny 3,700 eo ho eo amin'ireo tanàna fito miparitaka eran'ny nosy. Ny rano nanodidina ny nosy dia notendrena ho valan-dranomasina tamin'ny taona 1994 ary niaina fitomboana lehibe teo amin'ny fizahan-tany sy ny fampandrosoana. Ny morontsiraka lava sy ny hatsarana voajanahary nosy dia nahatonga an'i Tioman ho iray amin'ireo toerana fialantsasatra manintona indrindra any Malezia. Mahazo mpitsidika manodidina ny 250,000 isan-taona izy ankehitriny miaraka amina resy 81 sy fivarotana antsitrika 36 - isa izay nitombo tsy nitsaha-nitombo nandritra ny taona maro.
Ny haran-dranomasina manodidina an'i Tioman dia nisy fiantraikany nandritra ny hetsika famafana tamin'ny 1998 sy 2010. Mba hampidirana ny mombamomba ny faharetana amin'ny fitantanana ny haran-dranomasina, dia nisy andiana fanombanana faharetana natao mifototra amin'ny fombaika Obura, D. O & Grimsditch, G. (2009). Trano 18 manodidina an'i Tioman no nohadihadiana ary ny angona dia nanaporofo fa ny tena fiantraikany dia avy amin'ny: 1) fanovana ny fampiasana tany, 2) fandotoana maloto, 3) ny fiatraikany ara-batana amin'ny hetsiky ny fizahan-tany, ary ny 4) ny tsy fanarahana ny lalàna mifehy ny valan-dranomasina .
Ny fanadihadiana avy amin'ny fanadihadiana, miaraka amin'ny toro-hevitra, dia nalefa tany amin'ny masoivohom-panjakana federaly, fanjakana ary teo an-toerana. Tamin'izany fotoana izany, nanomboka ny fandaharam-potoana lava antsoina hoe Cintai Tioman (Reef Check Malaysia)Tiako i Tioman) hiatrehana ny fandrahonana any an-toerana ao amin'ilay nosy. Ny tanjona dia ny hampihenana ny fiantraikany eo an-toerana amin'ny vatohara, ny fananganana fahaiza-manao eo amin'ny fiaraha-monina eo an-toerana, ary ny fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitantanana ny haran-dranomasina.
Misy entana fako 8 iray taonina no novokarina tao amin'ny nosy isan'andro, izay nodorana tao anaty fandoro fako. Nandefa programa fanodinana izahay mba hampihenana izany vola izany ary hiatrehana ny fako izay tsy azo dorana toy ny fitaratra. Mba hiatrehana ny olana momba ny fandotoana rano dia notarihina ny fanadihadiana momba ny kalitaon'ny rano mba hanomezana angon-drakitra ho an'ny governemanta sy hamporisika azy ireo handray andraikitra. Tao amin'ny 2015, nisy programa miara-miasa amin'ny filan-kevitry Tioman Tioman dia nentina mba hialana amin'ny tsy fandriam-pahalemana, fanadiovana ary fihazonana; Izy io no fotoana voalohany nanolorana asa fanompoana toy izany tao Tioman. Ny filan-kevitry ny tanàna dia nanome torolàlana vaovao mikasika ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny ala ary amin'izao fotoana izao dia eo am-pamakiana toeram-pivarotan-tseraseran'ny sekta sy tobim-pitsaboana amin'ny alàlan'ny seranana. Mba hiatrehana ny fiantraikany amin'ny fananganana, dia napetraka ary napetraka tao amin'ny filankevitry ny tanàna ny fitsipika Standard Operation Procedure mba hampiasaina ho tari-dalana ho an'ny tetikasa fampandrosoana ho avy.
Ny fomba fizahan-tany tsy maharitra dia iray amin'ireo fiantraikany lehibe amin'ny Tioman. Mba handaminana izany olana izany dia nanolotra fanamarinana maharitra izahay. Nampahafantarinay ny fanamarinana UNEP Green Fins ho an'ny ivon-toeram-pisitrika, ny fanamarinana ny hotely Green Green Hotels ho an'ny hotely sy hotely, ary ny mari-pahaizana EcoFriendly Snorkel Guide ho an'ireo mpandraharaha fitsangatsanganana snorkel. Ireo fizotry ny fanamarinana 3 ireo dia mijery ny fiantraikan'ny tontolo iainana isaky ny asa fandraharahana ary manome sosokevitra hanatsarana. Ny fanamarinana dia miaraka amin'ny fanombanana isan-taona izay ahafahantsika mitazona ny fanatsarana azy ireo.
Ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan-tena eo amin'ny mponina ao an-toerana no antony iray lehibe nahatonga ny tsy fanarahana ny lalàna mifehy ny MPA. Mba hihoarana izany dia nanatanteraka fandaharam-pianarana sy fanairana isam-bolana niaraka tamin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa tao amin'ny nosy ny Reef Check Malaysia. Nampiasaina ihany koa ny kabary ampahibemaso sy ny media sosialy hanelezana vaovao momba ny haran-dranomasina amin'ny mponina. Mba hampihenana ny fiankinan-doha amin'ny harambato ho loharanon-karena ara-toekarena, ny Reef Check Malaysia dia nanolotra fiofanana fahaiza-manao amin'ny asa hafa, izay nanofanana ny mponina hiasa amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny governemanta. Ekipa nosy iray koa no nozarina hanampy amin'ny asa fitantanana isan'andro, toy ny fametrahana sy fikojakojana ny buoys, ny fanesorana harato ary ny fako an-dranomasina, ny fanaraha-maso ny fanamainana, ny fanaraha-maso ny Starfish Crown-of-Thorns, ary ny valiny haingana. Ny ekipa dia nantsoina hoe Tioman Marine Conservation Group (TMCG) ary nokaramain'ny Departemantan'ny Marine Parks Malaysia (DMPM) tamin'ny fomba ofisialy mba hanampy amin'ny asa sasany.
Fametrahana tsipika mitsatoka mba hisorohana ny fampiasana vatofantsika. Sary © Reef Check Malaysia
Fanaraha-maso sy famonoana COT amin'ny mpikambana TMCG. Sary © Reef Check Malaysia
Ny fandaharam-potoana Cintai Tioman dia voaporofo fa nahomby tamin'ny tanjona roa tonta. Ny fiakaran'ny biby any Tioman dia nihatsara, araka ny hita taratra tamin'ny fanadihadiana isan-taona momba ny Reef Check (www.reefcheck.org.my), ary tamin'izany fotoana izany dia afaka nampitombo ny fandraisan'andraikitry ny mponina tao amin'ny fitantanana sy ny ezaka amin'ny fiarovana amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny tsirairay fiaraha-mientana. Ny haran-koditra mafy manodidina an'i Tioman dia nitombo tamin'ny 12% hatramin'ny 2013, raha toa kosa ny fanadihadiana dia maneho ny fihenan'ny bisikileta 10 any amin'ny toerana hafa any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Malezia Peninsula. Nandritra ny hetsika fanarenana ny Global 2016, Tioman indray dia nahita volo kely ary kely dia kely loatra raha oharina tamin'ireo toerana hafa tany Malezia. Afaka nandray anjara tamin'ny orinasa maro teo an-toerana izahay tamin'ny alalan'ny programa momba ny fizahan-tany, miara-miasa amin'ny 70% amin'ireo toeram-ponenana sy ny 32% amin'ny mpandraharaha mpanafaka mba hanao sonia sy hiasa amin'ny fanatanterahana ny satan'ny "Eco-Friendly".
Tena fahombiazana ny TMCG, voalohany indrindra ny vondron'olona iray dia neken'ny DMPM tamin'ny fomba ofisialy ary nokaramaina mba hanampy amin'ny fitantanana ny fitantanana sy ny fiarovana. Ny ezaka nataon'izy ireo dia ny hampihenana ny fiantraikany toy ny fiarovana amin'ny vatohara, ny fahasimbana amin'ny harato anaty paiso, ary ny fandotoana. Ny TMCG koa dia nanampy tamin'ny ezaka fanarenana ny haran-dranomasina ary tamin'ny fampifangaroana ny elanelana misy eo amin'ny governemanta sy ny mponina eo an-toerana, izay nahatonga ny tatitra sy ny fampiharana ny fampiharana bebe kokoa. Ny fampahalalana dia nozaraina haingana sy lehibe kokoa noho ny teo aloha, mamela hetsika haingana ary mety hisambotra ireo fitsipika MPA. Ny lahateny ho an'ny besinimaro isan-kerinandro dia natao ihany koa ao amin'ny tanàna lehibe handinihana ireo olana ara-tontolo iainana sy vahaolana, hamporisihana ny fandraisana anjara avy amin'ny fiaraha-monina sy ny orinasa eo an-toerana.
Ny fitantanana ny fako amin'ny nosy dia nihanitombo be nanomboka tamin'ny 2013, ary nitondra fantsom-pitaovam-pitondrahana nomanina manerana ny Nosy ary rafitra ho an'ny fanodinana plastika, aliminioma, glasy ary karatra. Izany dia niantoka ny tora-pasika madio sy ny fako sasantsasany niditra tao amin'ny tontolo an-dranomasina. Nandritra ny taona 5 farany, ny 25,000 kg ny fako dia naverina nodiovina ary telo no nanangana ny ivon-toeram-pivarotany ao amin'ireo tanàna manodidina ny nosy. Ny ivon-trano fanangonana, antsoina hoe Rumah Hijau (Green House), dia miasa toy ny toeram-panangonana. Ny tranokely koa dia natsangana ary naverina tany.
Ny tahan'ny fanatontosana ny fianarana fahaizana momba ny fahaiza-manao dia nahagaga be ary ny tahan'ny asa aorian'izany. Ireo fandaharam-potoana dia nokarakaraina tamim-pitandremana tsara mba hiantohana ny fiarahamonina ao an-toerana. Raha tokony hiezaka ny hampiditra fomba vaovao na asa vaovao izy ireo, dia nijery ny fanatsarana sy ny fifehezana ireo fahaiza-manao efa ananan'ny efa nananana. Natao tany amin'ny nosy ihany koa ny fampiofanana ary nanaraka fikarakarana nandritra ny fotoana maromaro.
Mampiroborobo ny fanodinana amin'ny mpandray anjara ao an-toerana. Sary © Reef Check Malaysia
Mankatoava ireo hetsika lava be
Ampidiro ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana isaky ny dingana
Miara-miasa akaiky amin'ireo masoivohom-panjakana eo an-toerana, fanjakana ary federaly
Adiresy ny filan'ny vondrom-piarahamonina - raha tsy raisinao ho zava-dehibe izy ireo dia tsy handray anao tsara koa izy ireo
Programme ho an'ny fampandrosoana ny Firenena Mikambana, Programme GEF Small Grants
Departments of Marine Parks Malaysia
Tetikasa Juara Turtle
Faharetana ara-tontolo iainana sy sosialy
Fanaraha-maso ny haran-dranomasina